MediaLight vs. Lumadoodle: fahasamihafana lehibe - Jiro MediaLight Bias
MediaLight vs. Lumadoodle: fahasamihafana lehibe
Ry hazavana MediaLight:
Vao nahita ny tranonkalanao aho. Avy amin'ny Lumadoodle iray aho izay nanimba rehefa nifindra tamina trano vaovao aho. Misy antony ve ny vidin'ny jironao? Azonao atao ve ny mampiseho ahy ny angona tena izy?
Misaotra tamin'ny hafatrao ary azafady mamela ny valiny nahemotra. Mahazo an'io fanontaniana io matetika isika. Matetika aho no mamaly amin'ny fanontaniako manokana:
Mitahiry vola ve ianao raha mividy vokatra tsy mahavita izay tokony hatao?
Izahay dia manao jiro miandany ambany amin'ny vidiny mirary izay mitovy vidiny amin'ny Lumadoodle ihany, na eo aza ny fanolorana ny marimaritra iraisana amin'ny asa, ny fiantohana lava kokoa ary ny safidy fifandraisana.
Ka raha mitady hanao fampitahana mety kokoa ianao dia ampitahako amin'ny vaovao i Lumadoodle LX1 Bias Lighting avy amin'ny ekipa MediaLight ihany.
Mbola betsaka noho izany ny fanaovana hazavana mitongilana marina noho ny fakana tariby LED ambany-CRI (75 Ra) ihany, "manala ny fantsona plastika ary mametraka sticker eo an-damosina," araka ny itiavan'i Lumadoodle anao hino.
Raha tsy te-hiantraika ratsy amin'ny sary TV ianao, dia misy fenitra momba ny CRI (Index Rendering Index), ny chromaticité ary ny fizarana herinaratra spectral ny jiro manodidina izay tokony harahina.
Ny orinasanay dia nandany fito taona hanatsarana ny marina sy ny fiasa amin'ny vokatra na dia mbola tsy nihatsara mihitsy aza ny azy ireo, ary fantatray fa mbola misy toerana azo hatsaraina, ka izay no mahatonga anay miasa hatrany amin'ny iteration manaraka. Izany no mahatonga ny vokatra MediaLight ampiasain'ny matihanina amin'ny horonantsary saika amin'ny studio sy famokarana aorian'ny famokarana.
Tsy lazaina intsony izany, fa tsy mifandray amin'ny Lumadoodle, Govee, Antec, Zabiki na olon-kafa mihitsy isika .. Na izany aza, ny zavatra manaraka dia misoroka ny hevitra ary mifantoka amin'ny angona spectrophotometric sy famolavolana vatana.
Saingy, miverina amin'ny fanontanianao. Te-ho afaka handefa valiny feno miaraka amin'ny tena angon-drakitra, noho izany dia nandidy singa Lumadoodle vaovao aho ary norefesiko tamin'ny sekonic C7000.
Voalohany, andao esory ny fehiny avy amin'ny fonosan'izy ireo avy, ary jereo ny Lumadoodle eo akaikin'ny MediaLight. Ny zavatra voalohany ho tsikaritrao dia ny MediaLight manana LED bebe kokoa. Ny tsipika Lumadoodle 5m dia manana LED 90. Ny hazavana Media iray mitovy halavany dia misy LED 150. Misy 66.66% LED bebe kokoa amin'ny MediaLight isaky ny metatra.
Mampitaha Lumadoodle sy MediaLight
Ny chips ao amin'ny MediaLight dia mitentina 66% bebe kokoa mifototra amin'ny habetsaky ny LED fotsiny na dia ambany aza ny vokatra, ny chip SMD marina kokoa dia tsy nandany vola bebe kokoa hanaovana azy. Ny zava-misy dia, vidin'izy ireo farafaharatsiny Avo 20 heny isaky ny LED.
Mampitaha hazavana LED hazavana mitongilana
Voalohany, avelao aho hiteny fotsiny fa tsy fampitahana paoma-paoma ity.
MediaLight dia noforonina tamina matihanina mpahay siansa sy Lumadoodle tsia. MediaLight dia misy chips Custom Colorgrade Mk2 ary Lumadoodle tsy. Tsy tokony handondona ny olona miasa any izany, satria olona mahafinaritra be ry zareo, tsy mihevitra ny hatsaran'ny sary fotsiny izy ireo rehefa manangana ny vokatra ary tena mahitsy fo momba izany. Aleonay io amin'ireo orinasa mivarotra LED ambany kalitao ihany koa nefa milaza fa marina.
Nanandrana Lumadoodle aho taona vitsivitsy lasa izay ary nihevitra, toy ny teknolojia marobe, fa nisy fanatsarana mitombo nanomboka teo. Raha ny tena izy, ny CRI (index rendering loko) dia mbola ambany dia ambany na dia nandroso be aza ny teknolojia LED tao anatin'ny 5 taona lasa.
Lumadoodle Color Rendering Index (CRI) = 76.3 Ra (tsy ampy)
Fanondroana famaritana loko miloko hazavana (CRI) ≥ 98 Ra
Mifanohitra amin'izany, ny MediaLight voalohany (andrana taorian'ny beta) namidy tamin'ny 2015 dia nanisy CRI 91 (98-99 Ra ankehitriny). Saingy, na ny MediaLight an'ny 2015 aza dia nanana CRI ambony lavitra noho ny Lumadoodle ankehitriny.
Ny tsipika vaovao dia nandrefesana mafana kokoa noho ilay tsipika teo aloha, izay mbola ahitanao ny fandrefesako eto avy amin'ny 2017, fa mbola ara-drariny akaikin'ny CCT navoakan'izy ireo 6000K (mifanohitra amin'ny fenitra fanondroana 6500K).
Inona no tiako holazaina ara-drariny akaiky?
Ny tontolon'ny jiro fanavakavahana dia ny Wild West. Misy fari-pitsipika henjana tokoa, saingy toa vitsy no manaraka azy ireo.
Izahay dia manolotra ny vokatray ho fanamarinana tsy miankina an'ny ISF, raha ny ankamaroan'ny orinasa dia manonta "6500K" fotsiny amin'ny fonosana, na "fotsy fotsy", na "tena fotsy." Nividy iray aho hizaha toetra ilay soratra hoe "faly fotsy" eo amin'ilay fonosana. 😁
Ny roa amin'ireo mpandika lalàna ratsy indrindra dia i Vansky sy Antec. Ratsy loatra izy ireo ka tena nandratra hampiasa azy ireo. Raha sendra mandeha amin'ny tohatra na lampihazo fijanonana misy jiro masiaka ianao dia fantatrao ny tiako holazaina.
Jiro Vansky Bias nitaky mari-pana 6500K amin'ny tranokalan'izy ireo saingy refesina manodidina ny 20,000 XNUMXK
Antec Bias Jiro nilaza fa ny jiron'izy ireo dia "namboarina tsara ho 6500K" tao amin'ny tranonkalany saingy izy ireo refesina amin'ny 54,000K. Ny tsy fandehanan'ny siramamy, nampihoron-koditra izy ireo.
Mamintina an'ity fampidirana ity, Zabiki ary Halo Bias Jiro tena ratsy tarehy ihany koa tamin'ny zony manokana, saingy, soa ihany fa efa nivoaka tamin'ny asa aman-draharaha izy ireo, ka tsy mila mandinika azy ireo intsony.
Noho izany, ny valiny fohy dia lafo kokoa ny manangana MediaLight noho ny fisian'ny LED bebe kokoa, izay manana kalitao avo kokoa - namboarina mba hitaky "fenitra fanovozan-kevitra", miampy andiana singa hafa ilainao hanamboarana LED strip a hazavana mitongilana miasa tanteraka:
CRI an'ny -98 raha tokony ho 76 (ny jiro bias dia tokony ho farafahakeliny farafahakeliny)
Fandefasana fandevozana henjana kokoa (ao anatin'ny 50K an'ny 6500K)
Fananganana PCB varahina madio
Betsaka ny fanampiny izay ilainao hividy misaraka amin'ny jiro hafa (Ie manjavozavo ary mitokana, adaptatera, toggle on / off, kofehy fanitarana, clip fitetezana tariby).
Voamariko ve ny 66.66% LED bebe kokoa isaky ny andalana?
I fampanantenana fa hiditra ao amin'ny angona fotometrika manta aho atsy ho atsy. Saingy alohan'ny ataoko dia misy, ampahany iray mampanjavozavo ny marika Lumadoodle izay miteraka fikorontanana be, ary izany dia miteraka mailaka sy resaka Internet be dia be ho ahy.
Tsy nanandrana ny Lumadoodle Pro aho satria raha faly izy ireo mamoaka spec izay mbola ratsy kokoa noho ny jirony fotsy dia ampy ahy izany. Na izany na tsy izany, raha zavatra iray monja no ianaranao amin'ity mailaka ity: "ny fifangaroan'ny jiro tsy miova loko sy ny lokon'ny lokon'ny loko dia aza afangaro.
Ny tsipika MediaLight rehetra dia namboarina ho fotsy D65. Tsy miova loko izy ireo.
Noho izany, ny fampitahana anay dia ny MediaLight Mk2 sy ny Lumadoodle fotsy.
Ity ny angon-drakitra anaty format .csv ho an'ny fandrefesana avy amina hazavana roa nesorina niaraka tamin'ny Sekonic C7000 tamin'ny karatra volondavenona 18% tao amin'ny efitrano nolokoana loko Munsell N8 (Mety ho hitanao ny tontolontsika mitambatra amin'ny pejy hafa. Ampiasainay hizaha toetra ny LED, ny takamoa ary ny lohan'ny jiro, fa tsy ny volon-koditra voaangona.
Ny fandrefesana etsy ambony dia nalaina tamin'ny tsipika LED 1m halavany.
Mampitaha ny fampiasa MediaLight sy Lumadoodle
MediaLight dia misy dimmer. Lumadoodle dia tsy misy dimmer ho an'ny maodelin'izy ireo fotsy (ny jiro tsy mitongilana dia tokony ho fotsy D65, ka io no ampitahainay), fa afaka mividy iray eo ho eo amin'ny $ 12 ianao
MediaLight dia misy switch switch on / off. Lumadoodle tsy manao. Raha tsy maty miaraka amin'ny fahitalavitra ny seranana USB amin'ny fahitalavitra anao, dia asaina esory izany.
Ny dimmer sy ny lavitra an'ny MediaLight dia miasa miaraka amin'ny Remote un Harmony na IR eran'izao rehetra izao, i Lumadoodle dia tsy misy dimmer ary ny singa azo amidy dia tsy Harmony na IR universal remote mifanaraka.
MediaLight dia mampiasa PCB varahina tsy misy fangarony (alentika anaty rano) ho an'ny fitondra-tena ambony sy ny fahaizan'ny milentika hafanana, tsy i Lumadoodle.
MediaLight dia misy adaptatera (Amerika Avaratra ihany), Lumadoodle tsy misy.
MediaLight dia misy Warranty 5 Taona, ary ny antoka Lumadoodle dia 1 taona.
MediaLight tsy miova loko ary Lumadoodle dia manao maodely misy loko isan-karazany. Raha te hiova loko ianao, Lumadoodle dia safidy tsara kokoa. Na izany aza, ny jiro miova loko dia misy fiantraikany ratsy amin'ny sary eo amin'ny efijery ho an'ny fijerena fitsikerana ny loko. Vokatr'izany dia tsy manolotra azy ireo ny MediaLight.
MediaLight dia voamarina ho an'ny maha marina avy amin'ny Imaging Science Foundation ary natao hihoatra ny fenitra SMPTE ho an'ny hazavana manodidina ho an'ny tontolo horonan-tsary mitsikera. Lumadoodle dia akaiky akaiky ho azy ireo tanjona kendrena an'ny 6000K sy 76 Ra, fa tsy fari-pitsipika momba izany.
Toetra mampiavaka ny jiro
Ny LED MediaLight dia namboarina D65 (6500K miaraka amin'ny Δuv an'ny .003 - ny Δuv ny tara-pahazavana namboarina indray, mifanaraka amin'ny haavo CIE manara-penitra D65) miaraka amin'ny index rendering miloko avo lenta (CRI) an'ny ≥ 98 Ra. Ny fandrindrana chromaticity dia manakaiky ny x = 0.3127, y = 0.329.
Ny dokambarotra Lumadoodle dia manambara ny mari-pana ambany kokoa amin'ny 6000K (amin'ny pejy sasany) ary ny fandrefesana ataonay dia mahavita izany. Mafana kokoa noho izy ireo ny 6500K (5600K eo ho eo amin'ity santionany ity). Ny fanondroana loko misy an'i Lumadoodle 76 dia ambanin'ny SMPTE-Recommended sanda kely farafahakeliny 90 Ra.
Raha lazaina amin'ny zava-kendrena, ny jiro CRI avo kokoa dia marina kokoa noho ny jiro CRI ambany, ary ny 76 dia eo ambanin'ny tokonam-baravarana hamokarana sary marina.
MediaLight dia manana sanda R9 (mena lalina) ≥ 97. Lumadoodle dia manana sanda R9 ratsy. Midika izany fa Lumadoodle dia tsy manana mena lalina eo amin'ny fiparitahany, farafaharatsiny tsy mifandraika amin'ireo loko hafa amin'ny fiparitahana.
Ny hazavana mena (R9) lalina dia zava-dehibe amin'ny volon'ny hoditra marina noho ny fikorianan'ny rà ao amin'ny hodintsika. (Ity dia zava-dehibe na dia amin'ny fampisehoana transmissive aza, na dia mivadika ny vokany). Izy io koa dia manazava ny antony mahatonga ny jiro mirona hanana mpilalao maitso / manga raha oharina amin'ny jiro CRI avo. Ny tampon'ny hazavana dia misy tendrony manga sy mavo.
Fitsinjaram-pahefana elektrika sy CRI an'ny MediaLight Mk2
Fitsinjaram-pahefana elektrika sy CRI an'ny Lumadoodle
Mety ho fanamby iray ny maka sary an-tsaina ny tsy fitovizan'ny fizarana herinaratra spectral amin'ny loharano maivana roa, noho izany dia hifanindry ireo sary isika. Ny fizarana herinaratra ho an'ny Lumadoodle dia apetraka eo alohan'ny MediaLight Mk2. Ny Lumadoodle dia miseho fotsy manjelanjelatra miaraka amin'ny sisintany mainty ary ny MediaLight Mk2 dia miseho miloko.
Hitanay fa mamorona fotsy i Lumadoodle amin'ny alàlan'ny fampifangaroana phosforors mavo (phospors miaraka amin'ny halavan'ny halavan'ny 580 nm) amin'ny emitter manga. Tsy misy tendrony mena na maitso ao amin'ny santionany Lumadoodle (azonao atao ny manao hazavana fotsy CRI ambany amin'ny fampifangaroana loko roa - mavo sy manga).
Azonao atao ny mahita ireo tampon'ny maitso sy mena misaraka ho an'ny MediaLight Mk2 ary ireo loko izay miseho feno fahasahiana indrindra amin'ny graf dia maneho ireo loko tsy hita avy amin'ny fiparitahan'ny Lumadoodle. Ny "tampon-tendrombohitra" fotsy dia maneho ny haavon'ny angovo avo indrindra amin'ireo posiposy mavo ao amin'ny Lumadoodle.
Ny MediaLight dia tsy ahitana tampon-kavo mavo satria ny fitambaran'ny fôsôla mena sy maitso misy tarika mena dia atambatra amin'ny emitter manga hanome endrika MediaLight Mk2 SPD endrika akaiky kokoa an'i D65, na "simulate D65."
Na dia avy amin'ny mpifaninana aminy aza io fampitahana io, tsy toy ny vokatra sasany eny an-tsena, Lumadoodle dia tsy mihambo ho natao ho marimarina, ary ny vidiny dia ambany noho ny vidin'ny MediaLight, na dia tsy voatery ho ambany noho ny tadin'ny LED entam-barotra mitovy amin'izany aza izy io. Ampitahao amin'ny orinasa mampanantena zavatra betsaka noho izy ireo. Mampanantena CRI amin'ny 76 izy ireo ary izany no azonao.
Mazava ho azy fa ny vidiny ary na ny jiro miangatra tsara indrindra aza dia tsy hamonjy fahitalavitra ratsy amin'ny alàlan'ny fanovana diso.
Tianay ny tsy hivarotra amin'ireo olona tsy mila na maniry ny mahitsy. Betsaka kokoa ny olona mampiasa fahitalavitra mivantana ivelan'ny boaty noho ny olona manatsara ny fampiratiana azy.
Manantena ihany anefa izahay fa nasehonay ny antony mahatonga ny vokatray lafo kokoa amin'ny fanamboarana mba hahafahanao manapa-kevitra hoe inona ny vokatra mety aminao.
Ireto ny mpanorina an'i Lumadoodle miresaka momba ny vokatra jiro fanavakavahana sy ny fomba ifantohan'izy ireo hafa. Tsy mahazatra izany. Ny ankamaroan'ny LED amidy ho jiro mitongilana dia fantsona LED entina entina amina tanjona maro, toy ny jiro lay.
Ny jironay dia hahatonga jiro lay mahatsiravina, fa jiro miavaka izy ireo. Na izany aza, misy ny toe-javatra izay tsy dia maninona loatra ny fahamendrehana, ary ny fandoavana ny marina dia tsy mendrika ny vidiny fanampiny. Tsy tokony hividy zavatra lafo kokoa noho ny tianao aloa amin'ny endri-javatra tsy ilainao mihitsy ianao.
Raha manatsara ny fahitalavitrao ianao, dia tsy hamboarinao tsara amin'ny jiro tsy araka ny fahitan'ny mpijery azy ny jiro tsy marina. Ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fiasa eo amin'ny chromaticity sy ny fandokoana ny loko MediaLight sy Lumadoodle dia, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia mbola lalina lavitra noho ireo fiovana nataonao tamin'ny fampisehoana nataonao, ary satria manome fanazavana ilay teboka fotsy hita maso ireo jiro, hita fa miovaova ny mari-pana amin'ny loko. ary ny tint dia hifanaraka amin'izany fahasamihafana izany.
Raha ny hazavana manodidina amin'ny tontolo mijery dia mafana loatra ary manana Δuv avo loatra, dia ho maitso sy mafana kokoa noho ny hazavana D65 namboarina. Vokatr'izany dia fahita magenta sy mangatsiatsiaka kokoa noho ny D65 ny fahitalavitra iray, na dia natao kalibrasy aza.
Ary na dia tsy misy ny tsy fitoviana marina aza dia misy zavatra hafa tianao ampiana amin'ny Lumadoodle hanaovana azy ho fampitahana ny paoma-amin'ny-paoma miorina amin'ny vidiny, Ireo entana ireo dia misy fanaraha-maso lavitra, dimmer (jiro bias dia tokony apetraka amin'ny 10% amin'ny famirapiratana faran'izay betsaka amin'ny fampisehoana, noho izany dia mila dimmer ianao) adaptatera AC, tady fanitarana, haavo LED avo kokoa ary fe-potoana fiantohana lava be. Ny fanampiana kojakoja dia manidy ny elanelam-bidiny.
Ny fifanakalozana lehibe dia iray amin'ny vidiny mifanohitra amin'ny marina. Raha tsy mahazo ny tena ilainao ianao dia mety mandoa be loatra, na eo aza ny vidiny ambany. Ary, raha tsy mila fahamarinana ianao, dia mety ho vokatra tsara kokoa no alehanao raha tokony ho ny iray amin'ireo vokatra nohamarinina amin'ity pejy ity.
Fampitahana mahaliana izany. Iza amin'ireo jiro no tianao ho hitanao fa refesina manaraka?